Judo - Tompondakan'i Afrika :: Handefa mpikatroka dimy any Sénégal ny Malagasy • AoRaha
Judo – Tompondakan’i Afrika Handefa mpikatroka dimy any Sénégal ny Malagasy
Hotanterahina any Dakara, Sénégal amin’ny 20 hatramin’ny 23 mey ho avy izao, ny andiany 2021 amin’ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika taranja judo. Atleta dimy no fantatra fa hisolo tena an’i Madagasikara hiatrika ny fifaninanana lehibe.
Isan’ireny Ratsimiziva Fetra (-81 kg lehilahy). Fanararaotana ho an’ity Malagasy mila ravinahitra any Frantsa ity hitrandrahana isa handehanana amin’ny Lalao Olimpika hatao any Tokyo (Japana) amin’ny volana jolay 2021 ny fiatrehana an’io sehatra lehibe io. Izy no judokas malagasy tsara toerana indrindra amin’izany satria 587 ny isa azony, ankehitriny. Isa vitsivitsy sisa no tadiaviny dia azony ny tapakila handehanana ho any Japana.
Mbola manana fifaninanana iraisam-pirenena roa hafa hatrehana izy hahafahany mampitombo ny isany eo amin’ny filaharana maneran-tany, ankoatra ny tompondakan’i Afrika.
Mpikatroka vehivavy kosa ny efatra ambiny, ahitana an’Andriamifehy Mireille (-52 kg), Rakotovao Narindra (-57 kg) ary Nomenjanahary Damiella sy Rasoanaivo Razafy Aina Laura, samy ao amin’ny sokajy latsaky ny 63kg
Baolina kitra any Eoropa :: Nomontsanin-dry Rayan 3 noho 1 ry Mombris
Kitra – Fitantanana Barea :: Alentiky ny vokatry ny fanadihadian’ny FMF i Nicolas Dupuis